: at 10/19/2011 12:05:00 AM
ကိုဇော် said... | Wednesday, October 19, 2011 6:04:00 AM
ဟားဟား . . . မိုက်တယ်။
ဘယ်လိုပဲ လိမ်လိမ် . . ကြည့်နေဦးမှာပါပဲ။
မကြိုက်ရင်တော့ မကြိုက်ဘူးလို့ ထပြောမှာပေါ့နော်။
Anonymous said... | Wednesday, October 19, 2011 8:56:00 AM
ထင်ယောင်ထင်မှား ဆိုတဲ့ အတိုင်း တကယ့် ကို ထင်ယောင်ထင်မှား ဖြစ်ရပါတယ် ရွှေပြည်ကြီး အတိုင်းပါဘဲ
ဟုတ်မလိုလို နဲ့ မဟုတ်သလို ဖြစ်နေပါတယ်
မျက်စိတွေ လည်း မျက်ရည် ကျလာလို့ လစ်ပြီနော်
အပင်ပန်းခံ ပြီး ထင်ယောင်ထင်မှား လုပ်သူ ကြီး မကိ ကျမ်းမာချမ်းသာ ပါစေ
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) said... | Wednesday, October 19, 2011 10:42:00 AM
ဟဟ ဝိတ်ချမလို့ပါဆို မကီရေးတာ ကြည့်ပြီး အော်ရယ်မိတယ်။.
အကောင်လေးတွေ အရုပ်လေးတွေ အားလုံးမြင်ရတယ် မကီ
ဒါဆို မျက်စိကောင်းပါသေးတယ်နော်။ ဟိုပုံကတော့ အကောင် ၆ကောင်ဘဲမြင်တယ်။ အိုဘားမားကြီး သနားဖို့ကောင်းလိုက်တာ
အစိမ်းရောင်စက်ဝိုင်းထဲက အပြာရောင် အစက်လေးကို ကြည့်တယ်
ကွန်ပျုတာ ဆက်ကြည့်လို့ ရသေးတယ် ခိခိ
နေ၀သန် said... | Wednesday, October 19, 2011 11:39:00 AM
ရေးလည်းရေးတတ်ပါပေ့ဗျာ... ဘာတဲ့.. ပုပ်သွားတဲ့ အသီးနှစ်လုံးနဲ့ ဂေါ်တပြာဟုတ်စ... ဟားဟား.... မကိကိတို့ကတော့ တော်မြဲတော်ပဲ
မြသွေးနီ said... | Wednesday, October 19, 2011 5:03:00 PM
3Dကြိုက်သူမို့ ပုံတိုင်းကို အပြည့်အ၀ အားပေးသွားပါတယ်။ အမြင်လှည့်စားထားတာ ပညာပါတယ်နော်။
အမလေး...လေး... မူးချက်ကတော့...။ မူးမူးနဲ့ အိမ်ဆက်လည်လိုက်ဦးမယ် :)
Anonymous said... | Wednesday, October 19, 2011 5:04:00 PM
ကိုယ်တိုင်မူးတာ အားမရလို့ ဘေးနားကတယောက်ပါ ခေါ်မူးပေးလိုက်တယ် .. :D
mstint said... | Wednesday, October 19, 2011 7:03:00 PM
ကိကိရေ ဖဘကနေ မူးပြီးဝင်လာတာ ကိကိရဲ့ ထင်ယောင်ထင်မှားလှည့်စားတာတွေကြည့်ပြီး ခေါင်းက လုံးဝမထောင်နိုင်တော့ပဲ ချာလပတ်ရမ်းသွားပြီး))
မြစ်ကျိုးအင်း said... | Wednesday, October 19, 2011 10:17:00 PM
ကြယ်ပြာ said... | Thursday, October 20, 2011 11:31:00 AM
မကိရေ ... မျက်ရည်တွေတောင်ထွက်တယ် .... ရေးထားတာရော ပုံလေးတွေ လေဘယ်တပ်ထားတာရော မိုက်တယ် ...
မေသိမ့်သိမ့် ကျော် said... | Friday, October 21, 2011 6:31:00 AM
ခရစ္စတလ် said... | Friday, October 21, 2011 1:25:00 PM
ရီဝေဝေ ကိုယ့်ခေါင်းထဲမှာ ချာချာလည်နေတယ်